Ukudala i-viral loop yokuqukethwe kwakho kungase kube ikhefu ngokusebenzisa isu kumkhankaso wakho we-SEO. Ngenxa yalokho, abantu abaningi basungula futhi bahlanganyela okuqukethwe kwe-intanethi okwenza izinjini zokuhlola zihlole ukwethembeka kwamawebhusayithi abo. Ezimweni eziningi, lezi zingosi ziphezulu, zandisa isikhundla abahlala kuzo kuma-SERP. Le nqubo phakathi kwabanye ingenza okuqukethwe kwakho kuhambe ngegciwane, isu elibalulekile lokuthengisa. Lesi siqondiso singenza iwebhusayithi yakho ithole ithrafikhi ezindaweni eziningi ezihlukahlukene emhlabeni. Ngenxa yalokho, abasebenzisi bangathola lolu lwazi luwusizo futhi benze okuhle kakhulu kulo Source .